नेपोलिएन जी, आफू त फुर्सद भएको बेलामा यसो लेखिहाल्ने, नत्र महिनौ हराउनेमा परीयो। तपाई, ठरकी दादा, पाण्डाजी र एकलब्यजीहरुको मिहेनतले रंग ल्याउदैछ। बरु एकलब्यजी अलि ब्यस्त हुनु भए जस्तो छ। उहाको खरो लेख मिस् भैरखेको छ।
अतितका केहि कुराहरु लेखनमा म पनि क्युमा छु है ! अहिले ब्रिलियण्टम्यानजीको अहिले दर्हो गइराछ । अलि पछि मैले पनि विस्तारै थप्दिउंला भन्ने बिचार !
दौंतरी को अतित हेर्ने हो भने त त्यो अतितमा "भविश्य" को तस्विर कस्तो हुन्छ भन्ने पनि दोधार थियो । तर बर्तमानलाई हेर्दा भने राम्रो आशा पलाएको छ ।
अमेरिकी व्यस्त जिवनमा बसेर पनि लेख्‍ने, ईराकको बन्जर भुमिमा बसेर पनि मातृभूमि र नेपाली भाषालाई माया गर्ने, हिमाल देखी मरुभूमी सम्मबाट अनि युरोप देखी अस्ट्रेलीयासम्मबाट दौंतरीलाई माया गर्नेहरुको सकृयता देख्दा खुशी लाग्छ ।
नेपालियन जी ले यसलाई जनताको ब्लग नै भन्ने व्यानर राखी सक्नु भएछ अब बढि भन्दा बढि नेपालीहरु सहभागि हुनु पक्कै पनि अझै रोचक हुनेनै छ ।